SMT PCB Assembly - SHENZHEN KAISHENG PCB CO ။ , LTD
သော့ချက်စကားလုံး: SMT ညီလာခံ, PCBA ရှေ့ပြေးပုံစံ, SMT PCB ပရိသ, PCB SMT
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ် PCB ပရိသထုတ်လုပ်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် SMT PCB စည်းဝေးပွဲတွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေး၊ ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှင့် PCB ဖြေရှင်းမှုတို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သန္နိare္ဌာန်ချထားပါသည်။ ဒါ့အပြင်အထူးစိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေး။ PCB ကိုသင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရန်သင်၏အချိန်ကိုချွေတာရန်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SMT PCB ပရိသကိုရှေးခယျြ?
၂။ PCB ရှေ့ပြေးပုံစံအတွက်အရေးပေါ် ၁၂ နာရီဝန်ဆောင်မှု။
၄။ ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ လုပ်ဆောင်မှုစစ်ဆေးခြင်း။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖွဲ့သည်ပြသနာများကိုဖြေရှင်းရန် (သို့) ဖြေရှင်းရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဒါကငါတို့ဖောက်သည်တွေကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကတိုက်နယ်ဒီဇိုင်းမှပုံနှိပ်တိုက်ဘောင်များအတွက်အပြီးသတ်ကိရိယာများအထိဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အစုံကိုပေးသည်။ သင့်အားပထမတန်းစား ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲ ၀ မ်းသာပါသည်။
၆။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများဝယ်ယူရာတွင် ၁၀ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
၇။ စက်ရုံမှပြီးဆုံးသွားသောအခါသင့် PCB များအားမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့ပေးသည်။
၈။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော SMT စက်ရုံ ၈ ခု၊ ၁၀၀% ရာနှုန်းပြည့်စမ်းသပ်မှုများ၊ ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ဖြေရှင်းနည်းများ။
၁ ။ရှေ့ပြေးပုံစံ PCB ပရိသ
2.double- တဖက်သတ် PCB ပရိသ
3.multi-layer ကို PCB ပရိသ
4.aluminum PCB ပရိသ
5. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PCB စည်းဝေးပွဲကို
6. လျင်မြန်စွာ Turn PCB ပရိသ
7.Turnkey PCB ပရိသ
(၈) လေဆာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဂဟေဆက်သုံးသည့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော SMT ဖယောင်းစက္ကူ။
SMT PCB ညီလာခံ၏လုပ်ငန်းစဉ်:
PCB ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန် SMT ကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများတပ်ရန်အလိုအလျောက်စက်များအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ ဤစက်သည်ထိုအရာများကိုဆားကစ်ဘုတ်တွင်နေရာချသည်၊ သို့သော်၎င်းမတိုင်မှီ၎င်းတို့စက်၏ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်သောပြproblemsနာမရှိကြောင်းအတည်ပြုရန် PCB ဖိုင်ကိုစစ်ဆေးရမည်။ အရာအားလုံးသည်ပြီးပြည့်စုံကြောင်းအတည်ပြုပြီးသည့်နောက်တွင် SMT PCB တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ဒြပ်ပေါင်းများသို့မဟုတ်ဒြပ်ပေါင်းများအား PCB တွင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဂဟေဆက်ခြင်းအားကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်ပါ။အောက်ပါထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းလိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်.
SMT PCB ဘုတ်ကိုတပ်ဆင်စဉ်ကန ဦး အဆင့်မှာဂဟေဆော်သောငါးပိကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုးသားမျက်နှာပြင်နည်းပညာမှတစ်ဆင့် Paste ကို PCB သို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းကိုအလားတူ CAD output file မှပြုလုပ်ထားသော PCB ဖယောင်းစက္ကူများကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။ သင်ကလေဆာရောင်ခြည်သုံးပြီးဖယောင်းစက္ကူများကိုဖြတ်ပြီးသင်အစိတ်အပိုင်းများကိုဂဟေဆက်ရန်ပြုလုပ်မည့်အစိတ်အပိုင်းများတွင်ဂဟေဆက်ထားသောငါးပိကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဂဟေဆော်ရန်အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုအေးမြသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပြုလုပ်ရမည်။ သင်လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်စည်းဝေးပွဲအတွက်အချိန်အနည်းငယ်စောင့်နိုင်သည်။
၂ ။ သင့်ရဲ့စစ်သားငါးပိ၏စစ်ဆေးရေး
ဘုတ်တွင်ဂဟေကပ်ထားသောငါးပိကိုအသုံးပြုပြီးနောက်နောက်တစ်ဆင့်မှာ၎င်းကိုငါးပိငါးပိစစ်ဆေးခြင်းနည်းစနစ်များဖြင့်အမြဲစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အထူးအရေးကြီးသည်၊ အထူးသဖြင့်ဂဟေဆော်သောငါးပိ၏တည်နေရာ၊
သင်၏ PCB ဘုတ်အဖွဲ့သည် SMT အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်မှအသုံးပြုနေလျှင်ဒုတိယအဆင့်အတည်ပြုခြင်းအတွက်တူညီသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်တလဲလဲစဉ်းစားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သငျသညျကဒီမှာထဲမှာဂေါ်ဖီငါးပိဖော်ထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုခြေရာခံနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ circuit board သည်တပ်ဆင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများသည်လာမည့်စက်ရုံအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် CM မှအသုံးပြုသော BOM (Bill of Materials) သည်၎င်းအားအခြေခံအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် BOM တပ်ဆင်သည့်ပစ္စည်းများတိုးတက်ရန်လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
၎င်းကိုကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်အတွက်ထည့်ရန်ဘားကုဒ်ကိုသုံးပါ။ အစိတ်အပိုင်းများကိုအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသည့်အခါ၎င်းတို့ကိုမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်သည့်နည်းပညာဟုခေါ်သည့်နေရာနှင့်နေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
နေရာချထားဘို့အစိတ်အပိုင်းများ 6. ပြင်ဆင်မှု
ဒီနေရာမှာရွေးစရာနေရာတစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ စက်တွင် BOM တပ်ဆင်မှုကိရိယာနှင့်ကိုက်ညီသောထူးခြားသောသော့နှင့်အတူပါသည့်အရာတစ်ခုကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါစက်သည့်အရာတစ်ခုကိုအရာတစ်ခုကိုပြောပြရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အဆိုပါ SMT ပရိသဖြစ်စဉ်ကိုPCB ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲပြီးနောက်အဆင့်သို့ပြောင်းလဲနေသည်။ ၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအကျိုးရှိပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းပညာဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်မျှော်လင့်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ၎င်းသည်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်သောကြောင့် SMT PCB နည်းပညာတစ်ခုလုံးတိုးတက်ရန်ဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းကယနေ့ပင်သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော PCB board များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာရနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်၏ဘုတ်အဖွဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စံပြပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ဆက်သွယ်သင့်သည်။ အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်သူကိုသင်နားလည်ရန်အတွက်သင်သည်ခေတ်မီသောပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ပထမတန်းစားပစ္စည်းများ၊ စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းများနှင့်အချိန်မီပို့သောထုတ်လုပ်သူများကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။
PCBFuture ရဲ့မစ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုရှေ့ပြေးပုံစံမှထုတ်လုပ်မှုအထိကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆင့်မြင့် PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအားသက်ဆိုင်ရာအလုပ်များ၊ ပြproblemsနာများနှင့်နည်းပညာများကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိခံနိုင်ရည်ရှိစေမည့်ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသောအင်ဂျင်နီယာအတွေးအခေါ်များကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်မည့်ကောင်းမွန်သောအဝိုင်း၊
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကဆက်သွယ်ပါ sales@pcbfuture.com ငါတို့သည်သင်တို့ ASAP သင်ပြန်ကြားပါလိမ့်မယ်။